Ogaden News Agency (ONA) – Kala qaybsanaanta Generalada Tigrega oo meel xun gaadhay.
Kala qaybsanaanta Generalada Tigrega oo meel xun gaadhay.
Posted by ONA Admin	/ July 3, 2015
Wararka magaalada Adis Ababa naga soo gaadhaya ayaa sheegaya in Kala qaybsanaanta saraakiisha Tigreyga ay meel xun marayso.
Kala qabaysanantan ayaa ah mid baryahanba u dhaxaysa laba kooxood oo ay kala hogaaminayaan General Samora Yonis oo ah Taliyaha Ciidamada Itoobiya & General Abraham Wolde oo ahaa Taliyaha Ciimada Bariga Itoobiya ee fadhigiisu yahay magaalada Harar.
Khilaafkan ayaa waxa uu salka kuhayaa Gerneral Samora ayaa iskudayay in u kabadalo General Abraham taliyanimada ciimada bariga Itoobiya, halkaasoo uu in mudo ah kasoo talinyay. Qorshan ayaa larabay in loobadalo Abraham taliska dhaxe ee ciimada Itoobiay, haseyeeshee kooxda u General Abraham hogaaminayo ayaa gaashaanka kudhuftay go,aanka Gen. Samora. Wararku waxay intaas kudareen ineey kooxdani ku guulaysatay in Abraham laga dhigo taliyaha ciimada Koonfurta Itoobiya oo halkaas lagu fashiliyay qorshihii ay wateen kooxda u hogaaminayay Generla Samora Yonis.
Kooxda Genaral Abraham lasafan ayaa waxaa kamid ah taliyaha qaybta tababarka ciidamada Itoobiya General Sara Mokonin , taliyaha qabta sida goonida ah u tababaran ee loo yaqaano Agazi General Gebre Madhhin Faqadhe iyo taliyaha Gaaska Mahandiska dagaalama ee ciidamada Itoobiya B/ Gernal Mulu Girmay.
Wararku waxa kaloo ay intaas raaciyeen in ay kooxda Gerneral Samora u kow kayahay taliyaha nabad sugida Itoobiya Getachew Asafa oo in badan u khilaah ka dhaxeeyay Abraham Wolde. Khilaafkan ayaa waxa u keenay in loo kala tartamo ooy koox waliba dadaal dheeraad ah u gasho sidii ay u heli lahaayeen saraakiisha sare ka tirsan ururka TPLF oo ayaga lasafata.
Kadib markii u geeriyooday Meles Zenawi ayaa guud ahaan hogaaminta Itoobiya waxaa soo kala dhex galay khilaaf joogta ah . Khilaafkan ayaa waxa u ka dhex taaganyahay ururada TPLF, EPRDF & ciimada Itoobiya, taasoo keentay maanta in cid cid ka amar qaadani aysan jirin Itoobiya.
La soco ONA wararka ka soo kordha